DHAGEYSO:Taliye Xijaar oo sheegay inay diyaariyeen ciidamo ka hor tagga akhlaaq darrada baraha intarneetka | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Taliye Xijaar oo sheegay inay diyaariyeen ciidamo ka hor tagga akhlaaq darrada...
Taliyaha Ciidanka booliska Soomaaliyeed Janeraal Cabdi Xasan Maxamad Xijaar ayaa sheegay in dalka ay kusoo bateen gaar ahaan Baraha Bulshada waxyaabaha aklaaq xumada ah ee dadku ku faafinayaan, iyaga oo soo marsiinaya tiknoolajiyadda Casriga ee Adduunka ka hana qaadday.
Taliyaha oo Maanta ka qayb galayay Shir Sanadeedka Garsoorka dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay soo baxeen dambiyo cusub oo aan horay loo arag kuwaasi oo wax u dhimaya akhlaaaqiyaadka Bulshada, saameyna ku leh dhaqanka.
Waxaa uu intaasi ku daray inay sameeyeen oo ay tababareen Ciidan gaar ah oo la socda kana hortagga dambiyada iyo akhlaaq darrada ka dhaca baraha bulshada ee Social Media.
Waxaa uu Ciidamada ku amray inay Bulshada ku ilaaliyaan anshaxa wanaagsan.
Mar uu arrimaha ka hadlay ayuu yiri taliyaha ciidanka booliska dalka Soomaaliya
Hadalka kasoo yeeray Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa kusoo beegmaya xilli dhowr jeer Baraha Internetka ee la isticmaalo lagu soo bandhigay waxyaabo anshax ahaan aan wanagsaneyn, kuwaas oo saameyn tooda si wayn looga dareemay dalka Soomaaliya.
Previous articleSAWIRRO:Qaybo ka mid ah suuqa Bakaaraha ee Muqdisho oo xiran
Next articleMaxkamadda oo siidaysay 6 ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada dalka